China ala mgbanaka ụlọ ọrụ na-emepụta | Dongxing
Anya maka Emeputa
KOCKS igwe nri mpịakọta mgbanaka
Mechanical mejupụtara gold r ...
Cimented carbide mpịakọta mgbanaka
Carbide eri mpịakọta mgbanaka
The akụkụ n'etiti ma ọ bụ n'èzí uzo na mpịakọta ahụ nke profaịlụ mpịakọta. Dịka ọnọdụ dị iche iche nke mpịakọta mpịakọta na mpịakọta, enwere ike kee ya n'ime mgbanaka ngwụcha ngwụcha na mgbaaka mpịakọta etiti.
Yantai Dongxing ụlọ ọrụ (chemical mejupụtara na nkịtị na n'ibu Njirimara)
chemical mejupụtara 密度
Ba / cm 硬度
NA (mm) 抗压强度
NA (mm) 晶粒晶粒
F3675 80 20 13.6 Ogbe 83.5 2400 3400 2.0-3.2
Rịba ama: ọdịnaya nke WC bụ nkezi nke nri, ihe dị n'ime ya, ike na njupụta nke ngwaahịa nwere ike ịgbanwe ihe dịka 2%.
1. Guzogide ibu ọrụ na-agagharị
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nke oghere ihu nke ịmecha ahụ dị 50mm2, ebe nkwụsị nke ịkụcha ihe na-aga n'ihu ruo 100mm2. Dị nnukwu mgbanwe dị otu a na - achọ agagharị nke otu narị narị newton. Maka mmiri nchara, nchara bọọlụ na igwe ndị ọzọ pụrụ iche, ike ya na-agagharị ka ukwuu.
2. Guzogide oke ugboro na-agbanwe ike mmetụta
Oghere ikpeazụ V = 100m / s, na-ewere ihe ngosi mpempe akwụkwọ dị na mpụga 170 dịka ọmụmaatụ, mmetụta ugboro F = 11240 ugboro / nkeji. Ọ bụrụ na V = 80m / s, mpụta nke mpụta nke mgbanaka mpịakọta bụ 173 dịka ọmụmaatụ, f = 8836 ugboro / nkeji.
3, n'okpuru acid na alkali chemical corrosion
Dika mmiri na-eme ka mmiri na-agbanye mmiri nwere acid na alkaline, mmeghachi nke electrochemical nke mgbanaka mpịakọta, ya bụ mmeghachi omume nke galvanic cell, na-eme na gburugburu ebe a. Nsonaazụ ahụ mebiri mgbanaka ala. Igwe dị elu ga-akwalite mmeghachi omume a.
4. Iguzogide otu elu ugboro nwetụ kwes nrụgide mmetụta
Mgbe mgbanaka ahụ gbanwere ma rie ya na waya mkpanaka dị ọkụ, a na-enweta okpomọkụ a na-ebufe site na ya. A na-eme ka mkpara ndị ahụ na wires ajụla oyi. Ọdịiche dị n'etiti elu nke mgbanaka ahụ na akwa ya dị n'ime ya na gburugburu ya kpatara site na gradient nke nnyefe okpomọkụ. Ihe dị iche na mmụba linear ma ọ bụ nkwekọrịta nke kpatara ọdịiche a na ọnọdụ okpomọkụ na-ebute nrụgide okpomọkụ. Ebe ọ bụ na isi ọ bụla dị n'elu mgbanaka mpịakọta na-ekpo ọkụ ma mee ka ọ dị jụụ na ngbanwe oge dị elu, nrụgide nrụgide na-emetụtakwa mgbanaka mpịakọta na ntụgharị ugboro ugboro. Ihe si na nwughari nke ihe ojoo di egwu na mgbapu bu ihe ike gwuru, nke bu nguzobe nke ihe omuma.
5. Guzogide akwa ọsọ na abrasion
A na-atụgharịkwa oghere na-agbagharị agbagharị na esemokwu dị elu ma na-eyi ebe ụda mgbanaka na-agbagharị ma na-agbagharịkwa mkpanaka ọsọ ọsọ na waya. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndị siri ike na ihe nchara ígwè oxide na mmiri jụrụ oyi ga-emekwa ka mbuze na abrasives.
1. Gbaa mbọ hụ na ịkpụzi nkenke nke mgbanaka mpịakọta ma hụ na ọ na-ezute ihe achọrọ nke ịbịaru.
2. Gbaa mbọ hụ na àgwà dị n'ime nke mpịakọta mpịakọta, 100% site na ule na-enweghị mbibi; Ntinye akara nke mgbanaka mpịakọta na-agbaso ụkpụrụ ụlọ ọrụ gị ma zere ihe ndị na-emetụta nguzozi na-agbanwe agbanwe.
3, hụ na ogologo oge kwụsie ike nke àgwà nke mpịakọta mgbanaka, enweghị oghere, ájá oghere, gbawara agbawa, inclusions na ndị ọzọ na esịtidem àgwà ntụpọ, na nkịtị ojiji nke mpịakọta mgbanaka apụtaghị anụ, mgbape mpịakọta onu.
4. Gbaa mbọ hụ na nkwekọ nke mmetụta nke mgbanaka mgbanaka na arụ ọrụ mpịakọta arụmọrụ dị irè. Oge nkwekọrịta dị mma nke mgbanaka mpịakọta bụ oge mpịakọta mpịakọta dị irè na-arụ ọrụ.
5. N'oge anyị na-eji nke ụlọ ọrụ anyị ala yiri mgbaaka, anyị ga-eduzi mma nsuso iji melite ngwaahịa mma. Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla dị mma nke mgbaaka igwe na saịtị, anyị ga-enye azịza doro anya na ọrụ n'ime awa 12.
Nke gara aga: Ejiri nke ọma Tungsten Carbide Rollers - Carbide eri mpịakọta mpịakọta - Dongxing
Osote: Carbide eri mpịakọta mgbanaka
Carbide Eriri Roller Ring
Cimented Carbide ala Ring
Planetary Eriri ala mgbaaka
Tungsten Carbide ala Ring
Tungsten Carbide ala, Tungsten Carbide mpịakọta, Tungsten Carbide ala Ring, Machining Nkebi, Senti Carbide Roll, Mill Roll Mgbaaka,